Egwuregwu vidiyo na Afrịka: ohere na akụrụngwa - Afrikhepri Fondation
Egwuregwu vidio na Africa: ohere na akụ
MỌbụna ma ọ bụrụ na ahịa ndị ahịa na-egbochi nsogbu mmekọrịta akụ na ụba, Africa nwere ike iji egwuregwu vidiyo dị ka ihe nzụlite maka mmepe. N'ezie, mpaghara a choro dika ezigbo akụrụngwa akụrụngwa na teknụzụ kọmputa nke dị ugbu a mana enweghị kọntinenti.
Ya mere, a ka nwere ụzọ maka ndị Africa ga-esi gosipụta ihe ọhụrụ dị iche iche nke ihe e kere eke, ma na-enwe ọchịchọ imepụta ngwaahịa ha maka mmetụ ka mma.
Omenala Afrika ga - achota uzo ohuru iji gosiputa okwu, kamakwa isi iyi nke nsogbu iji merie ma gbasaa. N'ihi na egwuregwu vidio ga-enyerịrị ọhụụ "dị egwu ma bụrụkwa nke pụrụiche" nke ọdịbendị ndị bụ isi ntọala ya.
Ezigbo onye na-eme atụmatụ ihe ga-emekarịrị ntụpọ na mma, adịghị ike na ohere. Ọnụnọ anyị adịghị na ngalaba ahụ na-eme ka ndị nke mbụ bido na ya "nke a na-ahụ anya na nke kachasị" na oke ụlọ ọrụ nka n'ụwa niile.
Nchọpụta a sitere na ịdị nhịahụ anyị nwere ịbịakwute ụfọdụ nnukwu aha na ngalaba ahụ nwere mmasị ịgụ otu email na "Video Game si Africa". Mana anyị ga-enwe ohere ole na ole.
Ọ bụrụ na ịchọta mmasị a, ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-achọpụta ọrụ ndị na-adịghị mma na ọchịchọ obi ala, ọnụ ụzọ nke ọchịchọ ịmata ha ga-anọchi ogologo oge.
Ya mere, anyị nwere ibu ọrụ imeghe ụzọ maka ọdịmma nke ọgbọ nile nke Africa Designer.
Tụkwasị na nke ahụ, ahụmịhe anyị na ụdị ndị na-amụrụ anyị na-egosi na egwuregwu ahụ nwere ike ịga nke ọma ebe akwụkwọ ahụ dara, ịkọwa ụkpụrụ bara uru nye ntorobịa Africa.
State nke ahịa ahịa
Ewoo, dịka na ọtụtụ atụmatụ, Africa echefuola ụgbọ oloko egwuregwu vidiyo. A naghị agụnye kọntinent ahụ na map ndị ahịa nke ndị nkwusa n'ihi ike ike ịzụta ego nke ndị mmadụ na-elekwasị anya maka mkpa ndụ.
Ndị ntorobịa Africa nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akwụsi ike na mba Africa enweela ike ịnọ ruo ugbu a site na paireti nke na-eme ka egwuregwu ahụ dịrị ha. Dika nhọrọ a na-adịwanye obere ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume n'ihi oke egwuregwu, adịghị ike nke njikọ ịntanetị, na mgbanwe nke atumatu mgbochi paireti, Africa na-aga n'ihu nnukwu esemokwu dijitalụ, ọkachasị gbasara ndị na-eto eto. onye ga-akwụ ụgwọ maka igbu oge na teknụzụ na mmepe akụ na ụba.
N'ihe na-ekwu banyere uto maka egwuregwu, nhọrọ ndị ahụ na-eme ka ntụrụndụ na-eme ememe nke ha nwere. Egwuregwu Football nwere ọtụtụ n'ime ha mmasị, mgbe ahụ njem na agha egwuregwu maka mfe nke na-ejizi.
N'ihi ya, ndị na-emezughị usoro agụmakwụkwọ gburu mmasị na-agụ n'etiti ndị nke Afrika, e nwere mmasị na ha na-egwu egwuregwu na themes ma ọ bụ usoro na-achọ ọtụtụ imikpu (ọrụ na-egwu egwuregwu, atụmatụ egwuregwu, wdg .). Ihe ngosi nke Kiro'o na egosi, Otú ọ dị, igosi ihe ederede na-ewepụ ihe mgbochi a.
Egwurugwu nke Cameroonian Olivier Madiba, onye okike nke Kiro'o Games, mepụtara egwuregwu ahụ, ụlọ ọrụ ihe nkiri vidio mbụ na Cameroon na Central Africa.
"Aurion: ihe nketa nke Kori-Odan" bụ mkpụrụ nke Kiro'o Tales, usoro ọhụrụ, akụkọ na usoro dị mma nke Olivier Madiba na ndị na-eto eto ya chọrọ ịtọ.
Na isi otu ndi ntorobia, ndi nwere oke okike na ndi okike, Olivier Madiba sonyere na "Google Day Games" (GDG) nke emere na Douala, Cameroon site na Machị 1 rue 2. Werelọ ọrụ niile akpọrọ maka mmemme a ka e kere ma na-achịkwa ndị na-eto eto. A kpọrọ Olivier Madiba ka ọ kọọrọ ya ahụmịhe ya na ụmụ akwụkwọ na ndị ọzọ sonyere na echiche maka ihe ọhụrụ na ihe okike (Free Innovation Open Ideas Project Pitches). Site na ihe atụ nke onwe, ọ kpọrọ ndị ntorobịa niile sonyere ka ha banye n’achụmnta ego n’atụghị ụjọ. Egwuregwu Kiro'o, nke enyemaka nke Enterprise Madia, bụ onye Cameroon Ministry of Culture na-akwado. Mbido ahụ bụ otu ndị na-eto eto iri abụọ na ise sitere na nzụlite dị iche iche mana ha nwere otu obi: egwuregwu vidio. Ndị na-ekiri ya gosipụtara Studio ahụ dị ka otu n'ime ụlọ ọrụ nwere nnukwu mmepe maka 2014. Nchịkọta nke egwuregwu Kiro'o bụ ndị a chịkọtara na akara ngosi nke akara ngosi ya na ụkpụrụ ya: Mepụta egwuregwu nke sitere n'ike mmụọ nsọ n'Africa n'ịkọ akụkọ. yana ịmepụta egwuregwu nwere nnukwu egwuregwu dị egwu maka ndị egwuregwu.
Kiro'o Tales: Uzo ato nke okike
Kiro'o sitere na okwu Kiro'o Maono na Swahili nke pụtara "Ọhụụ ime mmụọ". Ebumnuche ụlọ ọrụ ahụ bụ ịmepụta edemede n'ime ya site na egwuregwu vidio. Atụmatụ imewe maka egwuregwu Kiro'o, nke a na-akpọ "Kiro'o Tales", agbajiri agbaji atọ okike, ya bụ akụkọ Kiro'o, Kiro visual na ụda Kiro'o. Ihe omuma a bu Kiro'o bu ndi mejuputara ihe omuma, akuko na akuko nke Afrika dika ihe ndabere iji meputa uwa di iche iche site na nkpuru obi ndi ohuru na nsogbu ohuru na ihe ngosi. Kiro'o a na-ahụ anya na-ezube ịmepụta mbinye aka eserese na kwaaji nke eserese a na-amata ozugbo ma nwee ikike mbupụ siri ike. Kiro'o sonoro na-eji egwu ọdịnala Africa eme ihe. Egwuregwu vidio nke Kiro'o Games mepụtara na-eji akụkọ ifo na ọdịbendị nke Africa eme ihe dị ka usoro akụkọ maka egwuregwu vidio. Emeghị 'Akụkọ Siro'o ka ọ bụrụ ngwa ọrụ maka Afrịka maka' ujo ọdịbendị ', kama ọ bụ mmanụ maka nkwekọ ha. Nke a bụ ihe kpatara ya ga - ejikọkwa ihe kachasị mma na isi mmalite ndị ọzọ. Site na Kiro'o Tales, Africa ga-enyerịrị ọrụ nke kọntinent a nke ga-akwalite ịdị n'otu ụwa karịa oge ọ bụla, site na ị nweta mmụọ sitere na ụkpụrụ nke ijikọ ọnụ dị na ọdịnala anyị kachasị mma: akụkọ ya na ndi ozo ya na oke okike, ezi uche nke ezinulo, nkwanye ugwu maka ihe ndi ekere eke, wdg. ", gosi ndị na-ebido ọrụ ahụ.
Omenala Afrika na obi nke egwuregwu
egwu "Aurion: ihe nketa nke Kori-Odan", onye ọkpụkpọ ga-egwu Enzo Kori-Odan na Erine Evou nwunye ya. Enzo, onye isi obodo nke Zama, na-enwe nnupu isi na ụbọchị echichi ya na alụmdi na nwunye ya. Ọ bụ nwanne Érine (Ngarba Evou) na-ahazi igba egbe ahụ. N’ịbụ onye a manyere na ndọkpụ n’agha, Enzo na Erine ga-aga ụwa ka Enzo chịkọta ihe niile gbasara ndị agha ya wee gbalịa weghachi ocheeze ya. Ya mere, ndi otu a nwere obi uto ime ememe oriri, na-elezi anya imebiga ihe ule. Nke a bụ oge mbụ yana na egwuregwu vidio, onye ọkpụkpọ egwu ga-ekwenyerịrị ndị enyi nke nna nke nwanyị a na-alụ ọhụrụ site na ịgafe ule ihe atụ dị iche iche. Ndi otu a weghaara ofufe nke Ngondo n'etiti sawa, agbụrụ nke Olivier Madiba si bia, iji nye omimi miri emi. Na mgbakwunye, a na-eji igbe nke bụ nsụgharị wuru obodo nke egwuregwu ahụ "Ekekọrịtara" omenala ndị dị n'ebe ọdịda anyanwụ Cameroon.
Ndị otu egwuregwu Kiro'o kwenyere na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na nsogbu ahịa ndị ahịa na-egbochi ya site na njirisi mmekọrịta akụ na ụba, Africa nwere ike iji egwuregwu vidio dị ka onye na-ebu ụzọ maka mmepe. "Ndi Africa aghaghi ekwuputa uzo ohuru ohuru site na ichota imetuta ihe ndi ahia ha".. Maka egwuregwu Kiro'o, ụlọ ihe nkiri dị n'Africa nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ọ na-elekwasị anya n'ahịa mpụga nke ahazirịrị na nke mbụ na mbụ ma mgbe ahụ ọ na-ahazi usoro mgbasa ozi nke kọntinent ya.
Ihe nzuzo asaa nke ihe ịga nke ọma - Richard Webster (Audio)
Eziokwu na - adabaghị adaba - Akwụkwọ edemede (2012)
Ndị a ọcha ọcha si Dr. Khadi Sy Bizet
Abamuru nke ndụ nwoke na nwanyị na-afọ ojuju na ahụike, omume na nke mmụọ